म्यान्मार सेनाले हवाइजहाजबाट ब’र्सायो ब’म, ज्यान जो’गाउन थाइल्याण्ड भाग्दै सर्वसाधारण - Rising Dainik
March 31, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on म्यान्मार सेनाले हवाइजहाजबाट ब’र्सायो ब’म, ज्यान जो’गाउन थाइल्याण्ड भाग्दै सर्वसाधारण
काठमाडौँ / सै’न्य कु’पछि दैनिक सेना तथा प्रहरीको गो’ली’बाट ज्यान गु’माइरहेका सर्वसाधारणमाथि म्या’न्मारका सेनाले ह’वाई का’रवा’ही पनि थालेका छन् । सीमा क्षेत्रमा विमान तथा हे’लिकप्टरबाट सेनाले सर्वसाधारणमाथि ह’वा’ई का’रवा’ही गरेको अ’ल्जाजिराले जनाएको छ ।
दक्षिण पूर्वी राज्य क’रे’न राज्यमा धार्मिक स’श’स्त्र स’मूहद्वा’रा नि’यन्त्रित क्षेत्रमा ह’वाई का’रवा’ही भएको बताइएको छ । मु’ट्र जिल्लामा ह’वाई आ’क्र’म’ण तथा ब’म प्र’हा’र हुँदा ३ हजार मानिस ज्यान जो’गाउ’न था’इल्याण्ड भा’गेको बताइएको छ ।
क’रेन वु’मन्स अ’र्गनाइजेसनले एउटा वि’ज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘सेनाले ह’वाई का’रवाही गरेपछि गाउँलेहरु जंगलमा लु’क्न बा’ध्य भएका छन् । ३ हजार सीमा पा’र गरेर थाइल्याण्डको श’रणमा पु’गेका छन् ।’‘हामी से’नाको अ’त्या’चा’र’माथि अन्तर्राष्ट्रिय स’मुदा’यको प्र’तिक्रियाको मा’ग गर्दछौं ।
हामी यो सन्देश पठाउन चाहन्छौं कि से’नाले द’ण्डहीन’ताको साथ काम गर्न सक्दैन’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । गत शनिबार से’ना तथा प्र’हरीले एकै दिन ११४ प्र’दर्शनका’रीलाई गो’ली हा’नी मा’रे’का थिए । लोकतन्त्र पु’नर्स्थापनाको मा’ग गर्दै सै’न्य शा’सनवि’रुद्ध प्र’दर्शन भइरहेको हो ।
से’नाको द’मनबी’च पनि प्र’दर्श’न रो’किएको छ । हालसम्म यहाँ ४५९ प्र’दर्श’नका’रीको ज्या’न ग’इसकेको छ । से’नाले लो’कता’न्त्रिक ने’तृ आङ सा’ङ सु’ची, राष्ट्रपति विन मि’न्टसहित देशका शीर्ष ने’ताहरुलाई हि’रास’तमा लिएर सत्ता ह’त्या’ए’का थिए ।
धाँ’ध’ली गरेर सु’चीको पार्टीले चु’नाव जि’तेको भन्दै सेनाले सत्ता हा’तमा लिएका थिए । एक वर्षपछि आ’म नि’र्वाचन गराएर मात्र स’त्ता ह’स्तान्तरण गर्ने जु’न्ता शा’स’क’को भनाइ छ । यता ज्या’न जो’गाउ’न भा’गेका म्या’नमारीहरुकोबारेमा था’इल्याण्ड सरकारले भने कुनै प्र’तिक्रिया ज’नाइसकेको छैन ।
पिताको मृ’त्युमा छोरीहरुले मनाए उत्सव, नाच्दै निकालियो श’वयात्रा कारण थाहा पाउदा दुनिया भयो चकित
किन भित्रभित्रै आ’त्तिएका छन् प्रचण्ड? देउवालाई भेटेपछि खुल्यो रहस्य
नेपाली गीत गाउँदै चिनियाँ राजदू त हो उ या न्छीले दिइन् दशैंको शुभकामना Social
दशै‌ं अफर, सस्तो मुल्यको पल्सर बाइक ( मूल्य सहित )
नेपालमा फेरी लकडाउन हुने निश्चित , कहिँले बाट ?
March 23, 2021 Ramash Kunwar